Iran: Maneho Hevitra Momba Ny Honohono Hisian’ny Fepetra Ara-Tafika Ireo · Global Voices teny Malagasy
Iran: Maneho Hevitra Momba Ny Honohono Hisian'ny Fepetra Ara-Tafika Ireo
Voadika ny 09 Novambra 2011 1:57 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Italiano, বাংলা, Español, македонски, Shqip, English
Lasa lohateny lehibe eny amin'ny pejy voalohany ny honohono amin'ny mety hisian'ny fanafihana ara-miaramila ataon'ny Amerikana na Israeliana amin'ireo toby nokleary Iraniana. Nanindry ireo manampahefana Israeliana fa mety hivadika ho zava-misy ireny honohono ireny, satria ny mpampahalala vaovao any Etazonia dia nitatitra fa Iran dia efa eo am-pototry ny haha-hery nokleary azy. Ny Misisitra Lefitra misahana ny Raharaha Ivelany Israeliana, Danny Ayalon, dia niteny fa tsy mivazivazy akory i Israely amin'ny fampitandremana nataony fa hoe mety handray fepetra ara-tafika izy hanoherana ny programa nokleary ifandroritana be ao Iran. Rosia, mandritra izany, dia nilaza fa hadisoana ny fanaovana ramatahora.
Ny mpisehatra avy amin'ny fiarahamonina sivily Iraniana dia naneho hevitra momba ity vaovao mampisavoritaka ity, tahaka ny nataon'ireo bilaogera rahateo.
Dodoozeh dia namoaka sarinà kilalao maro miendrika fitaovam-piadiana, ary manoratra [fa] fa ny Mpiambina ny Rpoblika dia vonona miaraka aminà fitaovana vaovao hiaro ny Firenena.
Takeview dia namoaka sary iray ahitàna vehivavy meva mipetraka eo ambony baomba, ao anaty lahatsoratra iray mitndra ny lohateny hoe “Fijery diso amin'ny ady ao Iran”. “Ry Angletera sy Etazonia dia efa manao drafitra hanafihana an'i Iran” hoy ilay bilaogera manoratra”, ao anatin'ireo fihenjanana mitombo ao Afovoany Atsinanana ao, izany no voalaza omaly alina”.
Nesvan mampahatsiahy ny adin'i Iran sy Irak tamin'ny taona 1980 tany ho any, ary manoratra hoe:
indray andro tany aloha be tany dia nisy ady tao Iran ary dia nandre ny fanairana noho ny loza mihatra isika… sarotra ny nitady izay harapaka teny an-tsena saingy vanim-potoana hafa izany mitaha amin'ny ankehitriny. Taona iray taorian'ilay revolisiona fotsiny dia nisaina ny olona fa hety ny zavatra rehetra rehefa voaongotr'izy ireo ny Shah. Sahala amin'ny hoe tsy ireo olona ireo ihany ireto miaina amin'izao fotoana eto amin'ity firenena ity. Androany indray izao dia mandre isika vaovao momba ny ady saingy hamaha inona ho antsika moa ny ady? Ho an'ireo firenena Tandrefana dia hanodina ny kodiarana ara-toekaren-dry zareo izany, hivarotana fitaovam-piadiana sy hamongorana ny toby nokleary Iraniana. Ry zareo afaka hahazo tombontsoa, fa mba ahoana ny amintsika? Tsy heverinao ve fa ny fanafihana voafetra hatao an'i Iran dia vao mainka hanamafy toerana an'io fitondrana io eo an-taonany maro?
Ary Azar Tondar [fa] miteny hoe:
misy izao ny marika ahitàna fa ny firenena tandrefana dia mikendry ny hanamafy ny teritery amin'i Iran, mandritra io fotoan io ihany ny fanafihana ireo foto-drafitrasa nokleary Iraniana dia lasa lohateny lehibe: fehin-kevitra iray avy amin'ny Firenena Mikambana manameloka ny fanitsakitsahana zon'olombelona ao Iran, tatitra iray an'ny Masoivoho Iraisam-pirenena momba ny Hery Atomika momba an'i Iran no niahiahy hetsika nokleary sy tsokombakomba aminà mpampihorohoro.